WordPress: Sharaxaad Meta Dynamic on Post kasta | Martech Zone
Monday, July 2, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Cinwaankaaga aasaasiga ah ee WordPress wuxuu qeexayaa sharaxaad keliya oo ah bog kasta oo ka mid ah boggaaga, iyadoon loo eegin bogga uu qof ka soo degay mashiinka raadinta. In sharraxaadda mashiinka raadinta aysan dhab ahaan sharxi karin boostada ku jirta baloogga waxay sababi kartaa in dad yari ay gujiyaan xiriiriyahaaga.
Marnaba kama aanan fikirin tan illaa dhammaadka wiigga markaan helay dib-u-eegista soo socota ee boggeyga ee BlogStorm:
Wanaagsan, mid fudud oo isku xidhka sed! Isku day inaad ku darto qaar ka mid ah badhamada calaamadeynta bulshada hoose ee qoraaladaada iyo qaar ka mid ah sharaxaada tusaalooyinka meta ee bog kasta.
Lacag sameynta baloog sidan oo kale ah waa adag tahay, haddii aad wax walba isku daydo John Chow ayaa isku dayay markaa waxaad ku socon doontaa wadada saxda ah.
Iyada oo xoogaa mala awaal ah iyo isku xirnaansho badan oo xiriir ah waxaad awoodi doontaa inaad hesho xiriiriyeyaal kugu filan oo aad ku kala sareysid ereyo runtii aad u wanaagsan (laga yaabee inaad horey u sameysay) Markaad uqurxiso shuruudahaan waxaad ku dhajin kartaa boggaga xiriiriyeyaasha xiriirinta iyo Adsense isla markaana waxaad ka heli kartaa faa'iidooyinka.
Inaad dib u eegis ku sameyso bartaada waa wax fantastik ah maxaa yeelay inta badan waxay aqoonsan doontaa qaddiyad ka jirta bartaada oo aadan dheg u dhigin. Xaaladdan oo kale, waa sharraxaadda tag meta ee mid kasta oo ka mid ah qoraalladayda. Sharaxaada Meta waxaa adeegsada makiinadaha raadinta si loo adeegsado sharaxaad kooban oo ku saabsan bogga ku qoran natiijooyinka. Maaddaama dadku arki doonaan bogag kala duwan markay ku raadinayaan, maxaa diidaya inaad u adeegsato sharraxaadyo kala duwan oo meed ah bog kasta?
Waxaan horeyba ubadalay cinwaankeyga si aan ugu daro keywords keyword keyword key key meta waxayna iga caawisay wanaajinta darajooyinka qoraaladeyda qaarkood. Dalbashada sharraxaad kaladuwan ma kordhin karto meelayntayda raadinta, laakiin sida BlogStorm tilmaamayo - waxay u horseedi kartaa isdhexgal badan oo bogaggayga ah natiijooyinka raadinta dadka.
Haddii bogga ku yaal boggeygu uu yahay hal bog, sida markaad gujiso hal qoraal, waxaad u baahan tahay qayb ka mid ah bogga. Waxaan rabaa in qeexitaanku noqdo kan ugu horeeya 20 ilaa 25 eray ee boostada laakiin waxaan ubaahanahay inaan kala shaandheeyo wixii HTML ah haba yaraatee. Nasiib wanaag, WordPress wuxuu leeyahay shaqo i siin doonta waxa aan u baahanahay, _xusuusta_rss. In kasta oo aan loogu talagalin isticmaalkan, waa hab xariifnimo leh oo loo adeegsado xaddidaadda erayga loona baabi'iyo dhammaan walxaha HTML!
Xitaa waxaan laga yaabaa inaan tallaabadaas sii qaado oo aan ka faa'iideysto Qeybinta Ikhtiyaariga ah gudaha WordPress si loo buuxiyo sharaxaadda meta, laakiin hadda kani waa toobiye fiican oo hagaagsan! (Haddii aad isticmaasho habkan oo aad gasho Qeyb Ikhtiyaar ah, waxay u adeegsan doontaa qoraalkaas qeexitaanka Meta).
Shaqadani waxay u baahan tahay inaad ugu yeerto gudaha Loop-ka, markaa waxaa jira xoogaa murugsan:
FIIRO GAAR AH: U hubso inaad ku beddesho “My description default” wax kasta oo aad hadda haysato ama aad jeclaan lahayd sida sharraxaadda meta ee bartaada.
Waxa koodhkani sameeyaa wuxuu siinayaa sharraxaadda tusmada meta ee boggaaga meel kasta laakiin bogga Hal Boosto, taas oo ay ku qaadanayso ereyada ugu horreeya ee 20 oo ay ka saaraan dhammaan HTML-ga. Waxaan sii wadi doonaa inaan hagaajiyo koodhka (ka saarista safafka) iyo ku darista 'haddii bayaan' haddii ay jiraan Qayb Ka Tirsan Iqtiyaariga ah. La soco!
Tags: sharaxaad meta metatilmaanta metaSEOWordPress
Jul 2, 2007 markay tahay 4:16 PM
Tani waa cabsi Doug. Waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Jul 2, 2007 markay tahay 5:10 PM
Nice one Doug, waxaan rajeynayaa inaan arko horumarkan. Aniga waa waxoogaa shaqo qashin ah waqtigan (waxaan u maleynayaa), marka waxaan ku faraxsanahay inaan arko qof kale oo qabanaya shaqada adag!
Jul 2, 2007 markay tahay 8:25 PM
Hal qoraal - Waan cusbooneysiiyay boostada tan iyo markii aan u maleynayay inaad wax caqligal ah sameyneyso haddii qof uu adeegsado "Qeybinta Ikhtiyaariga ah" ee boostada. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid - Qeybta Ikhtiyaariga ah si otomaatig ah ayaa loo soo bandhigi doonaa haddii laga faa'iideysto feature muuqaal kale oo wanaagsan oo ka mid ah shaqooyinka_excerpt iyo the_excerpt_rss.
Jul 3, 2007 markay ahayd 7:10 AM
Hahaha…! Runtii waxaad u jeedaa inaad garaacdo John Chow, miyaadan ahayn? ^^ Wanaagsan!
Jul 3, 2007 markay ahayd 7:30 AM
Sameynta wax ka badan $ 10k bishiiba boggeyga way fiicnaan laheyd! Si kastaba ha noqotee, John ('saaxiib qaali ah' iyo qof aan ixtiraam aan caadi aheyn u hayo) wuxuu wax badan galiyaa bixinta feejignaanta. Dhawaan ayuu dhib kala kulmay Google iyo Technorati - kuwani waxay wax yar ku dhaawici karaan dakhligiisa mustaqbalka.
Laakiin waan ku faraxsanahay in ragga isaga la midka ahi ay leeyihiin cahonies si ay u riixaan xadka - John wuxuu u oggolaanayaa ragga ila midka ah inay ogaadaan halka khadka ku yaal!
Jul 3, 2007 markay tahay 11:15 PM
Kaliya dabagal, waan helay ah All in One SEO Pack WordPress Plugin taas ayaa adiga kuu samayn doonta!
Waxaan soo jiidan doonaa qaar ka mid ah koodhkayga toddobaadkan oo waxaan hirgelin doonaa qalabkan halkii aan nadiif ka ahaan lahaa. FIIRO GAAR AH: Laga helay John Chow's Blog.
Jul 4, 2007 markay ahayd 11:32 AM
Ka waran ka mid noqoshada magacyada qaybta iyo magaca baloogyada ee qoraal kasta…. kani miyuu ku horumariyaa arrimaha SEO? Sidaas ayaan u maleynayaa!
Jun 17, 2008 at 2: 53 PM
Haddii aad u socoto 'YAPB' sida xalka sawirkaaga, koodhkani wuxuu u jiidayaa sawirkaaga hogaaminta meertada oo wuxuu ku muujiyaa jirka korkiisa marka aad daawaneyso dhamaadka hore.
`` rolandinsh ''
Nov 27, 2008 saacadu markay tahay 2:19 PM
Waad ku mahadsan tahay koodhka, waxaan kaliya ku beddelay "Sharaxdayda ugu dambaysa"